Kitapom-Panampian’ny FMI Ho An’i Pakistan, Mitondra Sondro-bidim-Piainana Mampanaintaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2013 22:18 GMT
Hetsi-panoherana tao Hyderabad, Pakistan manohitra ny FMI sy ny Banky Iraisampirenena noho ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny herinaratra manerana ny firenena. Sary an'i Muhammad Yameen Qureshi, Fizakàmanana Demotix (6/10/2013).
Any Pakistan, firenena iray efa kendan'ny fahantràna, mamay ny fahatapahan'ny herinaratra ary ny olana ara-pandriampahalemana, miakatra ny vidim-piainana, noho ny fepetram-pitsitsiana napetraky ny fitondràna mba hanatanterahana ireo fepetra henjana be mifamatotra aminà kitapom-panampiana mitentina 6,6 lavitrisa dolara amerikana avy amin'ny Tahirim-bola iraisampirenena ( FMI).
Nankatoavin'ny FMI ny fampindramam-bola mandritra ny telo taona mba hanaovana izay hahamarin-toerana ny toekaren'i Pakistana, izany dia tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asany Famatsiam-bola Mivelatra nanomboka ny Septambra 2013. Ho setriny, takiany ny hametrahan'ny governemanta Pakistane fepetra henjana ho fitsitsiana, tahaka ny fametrahana fampihenana tetibola, fampihenana fanohanana ara-bola, fampàkarana hetra, fanomezana ny orinasam-panjakana izay miasa anaty fatiantoka mba ho an'ny tsy miankina ary ny fanavaozana ny sehatry ny angovo arahana fanondrotam-bidy.
Ao anatin'ny ezaka ho fanarahana ny fepetra napetraka dia nahenan'ny governemanta hatrany amin'ny 35 isan-jatony ny famatsiana ara-bola, izay niteraka fitomboan'ny fitontongan'ny sandam-bola sy fiakaran'ny vidin'entana ho an'ny tsena anatiny.
Pakistan, toy ireo firenena maro an-dalam-pandrosoana, dia efa hatramin'ny taona 80 no teo ambany vahohon'ny findramam-bola tsy tapaka tamin'ny FMI. Ny sasany amin'ireo findramam-bola amin'izao fotoana dia nalaina hamerenana ny trosa teo aloha – “trosa manao kodiaran-tsarety”. Ny governemanta Pakistane amin'izao fotoana izao koa dia efa very fanantenana tamin'io kitapom-panampiana io, ho ‘fisorohana ny olana tahirim-bola vahiny’..
Na dia notsindrian'ny Minisitra Federaly ao Pakistana misahana ny Tetibola sy ny Karama, Ishaq Dar, aza hoe io governemantany io, izay vao dimy volana monja, avy amin'ny Ligin'ny Silamo (Nawaz) ao Pakistana, dia “nandova toekarena reraka” ary nilaina mihitsy ny fanatsahàrana ny fanohanana ara-bola avy amin'ny fanjakàna mba hananan'ny firenena fahavitan-tena, ny fitontongan'ny sandam-bola efa nahatratra 9.1 isan-jato tamin'ny Oktobra 2013, ny avo indrindra tato anatin'ny 16 volana farany.
Sary maneho ny fitomboan'ny fitontongan'ny sandam-bola tanatin'ny taona iray / year-on-year (YOY), araka ny nandrefesana azy avy amin'ny Consumer Price Index (CPI) / indice des prix à la consommation (IPC) Loharano: Biraon'ny Antontanisa ao Pakistana , Islamabad..
Nanaka-danitra ny vidin-tsakafo, hatramin'ny vidin'ireo entana hafa ilaina andavanandro. Koa satria ny karaman'ny vahoaka tsy niakatra niaraka tamin'ny fitontongan'ny sandam-bola, midika fidirana anaty fepetram-piainana mankarary saina izany ho an'ny maro, indrindra fa ho an'ireo izay miezaka ny ho velona aminà karama raisina isanandro. Araka ny lahatsoratra iray ao amin'ny IRIN Asia, nisy fiantraikany henjana be teo amin'ny fiahiana ara-tsakafo tao amin'ny firenena ilay fisondrotan'ny vidim-piainana.
Araka ny tatitry ny The Express Tribune, niakatra 18,6 isanjato ny vidin'ireo vokatra fihinana mety lò, raha 14,6 isanjato ho an'ireo akanjo sy kiraro. Anatin'ny fotoana nandraisan'ny governemanta fepetra hampihena ny famatsiana ara-bola sy hampiakatra ny vidin'ny herinaratra, mametraka vesatra ara-bola goavana be eny an-tsorok'ireo olom-pirenena tsotra ao Pakistana izany rehetra izany.
Nitombo ny feo manohitra ilay fepetra napetraka hanatanterahana ireo didy avy amin'ny FMI. i Rabab Khan, mpamorona votoaty dizitaly, dia naneho hevitra ao amin'ny Google+ :
Tsy tonga amin'ny tanjona tokony hotratrariny ireo fampindrmana vola avy amin'ny mpanolo-tànana iraisampirenena toy ny FMI sy ny Banky Iraisampirenena, raha toa ka ikendrena fametrahana politika hisian'ny firoboroboana tsaratsara kokoa, noho izy ireny toa vao mainka aza mitondra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana bebe kokoa, tsy fahamarinan-toeran'ny toekarena, ary tsy fanànana asa eo amin'ilay firenena.
Ao amin'ny kaonty ofisialin-dry zareo ao amin'ny Twitter, ny antoko mpanohitra Pakistan Tehreek-e Insaf dia nibitsika hafatra iray avy amin'ny filohany, ilay mpilalao “cricket” fahiny, Imran Khan :
#IKPressCon: Dia natao araka izay voalazan'ny fifanarahana amin'ny FMI ny fampidinana sandam-bola. Tsy rariny atao amin'ny vahoakan'i Pakistana – Imran Khan
Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid), mpanao gazety, nitatitra hoe :
Tafakatra 9,08 isanjato ny sondro-bidim-piainana tamin'ny Oktobra 2013 raha oharina tamin'ny herintaona toy izao. Io no fisondrotana avo indrindra tato anatin'ny 14 volana. http://t.co/ieecCvbWzV
Sayem (@SayemZA), mpiasan'ny banky, dia nanondro sary iray mampiseho ny fiovaovan'ny Sensitive Price Indicator (SPI) hatramin'ny nanaovan'ny Minisitry ny Tetibola ny fanambaràny tamin'ny Jona 2013:
Sary iray ho entina manazava ny zava-boarakitra vaovao amin'ny zava-bitan'ny PMLN – sondro-bidim-piainana mirehidrehitra!!! #Pakistan #PMLN #PTI #PPP #MQM pic.twitter.com/RzRvOxrWFj
Nivala-ketraka i Usama Usmani, mpianatra momba ny fitantanambola avy any Karachi :
Mampiseho ny dona faran'izay ratsy naterany ao #Pakistan izao ny sondro-bidim-piainana! Ary isika sondriana amin'ny adihevitra tsy misy ilàna azy satria faran'izay ratsy ity firenena ity! Tsy manam-bintana ireo olona tsara eto.
Ho an'ny saranga ambany sy salantsalany, ny fepetra noraisin'ny governemanta mba hiteraka fidiram-bola sy ny tsy fahafahany mifehy fiakaran'ny vidin'entana tsy hanaka-danitra dia zava-mahasorena mahatezitra. Ho fanampin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, dia tamin'ny fomba henjana no nametrahan'ny governemanta ny ‘hetra eny amin'ny fandoavam-bola‘ amin'ny fandoavana mivantana amin'ny lelevola, noho ny tsindry mafy avy amin'ny fitontongan'ny sandam-bola, satria tena nidina be tsy nisy toy izany ny sandan'ny vola ‘rupee’ Pakistane.
Misanda avo be mampipotsaka ny mason'ny mpitazana ny dolara Amerikana raha mitaha amin'ny rupee Pakistane, mila mahita 108.27 rupees vao dolara iray, mahatonga ny fanafarana entana sy ny findramana vola ho lafo dia lafo izany. Neken'ny FMI io niaraka tamin'ny fampidinana ny rupee Pakistane sy ny fanafoanana ireo tohana ara-bola amin'ny herinaratra, mbola hitombo hatrany ny vidim-piainana. Ankoatra izany, mbola hiharatsy kokoa ny krizy amin'ny tsy fisian'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny famoronana asa.
Mba hampitsaharana ny fisondrotana efa tsy zaka intsony sy hihazonana ny toekarena efa latsaka an-akterena mba ho amin'ny làlana tsara, ny 13 Novambra 2013 teo, dia nakarin'ny Bankim-Pirenena ao PAkistana ho 10 isanjato ilay zanabola 9,5 isanjato fanomeny teo aloha, amin'ny fanantenana fa hanamora ny tsindry ateraky ny vidin'entana izany ary ho tohana ho an'ny vola rupee.
Ny fotoana no hany hanambara amintsika raha ho foana ity sondro-bidim-piainana ity, hitondra izay fanampiana tena ilain'ny sarambabem-bahoaka ao Pakistana.